Pakistana: Karatra mandiso fanantenana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Novambra 2018 5:55 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Shqip, Español, English
Noresahana betsaka ny tantaran'ny tsy fahaizana mitantana ireo fanomezana nangonina ho fanampiana ireo tra-boinan'ny tondra-drano tany Pakistana. Tsy izay ihany, fa nampametra-panontaniana ihany koa ny fomba fizarana ireo fanampiana sy ny fampiasana ireo vola tamin'ny tanjona hafa. Iray tamin'ireo hetsika mampiady hevitra toy izany ny programa “Watan Cards” (ara-bakiteny hoe karatra nasionaly na kara-pirenena), izay amoahana sy hanomezana karatra elektronika mandeha amin'ny VISA ho an'ireo tra-boina tamin'ny tondra-drano. Mety ho tsotra dia tsotra ny vahaolana, nefa be dia be ny fahasarotana sy ny olana tafiditra tamin'izany.
Tsy ny fampiasana ihany, fa nahasosotra ihany koa ny famoahana ireo karatra ireo. Taha Kehar ao amin'ny Pak Tea House nanoratra hoe:
Ary mba hanampiana trotraka ny toe-draharaha, nisy ny tatitra momba ny fivarotana karatra Watan, araka ny nampahafantaran'i Tazeen tao amin'ny bilaogy The Pak Spectator:
Ankoatra izany, nisy ny tatitra sy ny resabe tao amin'ny media sosialy momba ny fanakanan'ny governemanta provinsialy ny karatra Watan mba ho ampiasaina amin'ny tanjona tian'izy ireo manokana. Marvi Sirmed, mpanoratra, nandrisika ny hanaovana fanadihadiana araka ny tokony ho izy:
Manasa ny sasany amin'ireo mpitati-baovao sy mpanadihady aho mba hanadihady ny antony mahatonga ny Punjab MNA miezaka manakana ny karatra Watan, toy ny nataon'izy ireo tamin'ny endrika BISP?